Calendula isitshalo lithole eyaziwa ngokuthi "uzipho" ngenxa ukuma eyinqaba imbewu, okuyinto musa ibukeke isilwane izimpiko. Abantu abaningi ensimini uyakhula imbali. Marigolds kuthiwa ethandwa kakhulu, etshalwa izinto eziningi ezinkulu ngoba bebahle nje kuphela kodwa futhi ewusizo kakhulu. Zingasetshenziswa ukuheha inani elikhulu izinambuzane impova kangcono nezinye izitshalo ewusizo. Ukuheha intshisekelo yalabo abangaba labo izinambuzane embi efana aphid, lezi zimbali bayocabanga "igalelo ezinkulu" futhi ngeke umsindise engadini nezitshalo horticultural.
Ukhula Othandweni engadini calendulakuva yakhe, kungaba kakhulu ngempumelelo ukukhipha yonke le nematodes nezinye izinambuzane disorient befuna ukuthola bona adle. Imbali disseminates iphunga eqinile ethize, kanjalo ukuvikela izitshalo eziningi zemifino. Kodwa ungabi engalawuliwe zokutshala imbali nail (esesithombeni ngakwesokunxele) kuzo zonke izindawo ensimini. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi, ngaphezu izinzuzo, unamandla umonakalo: zinqanda ukukhula ikhabe, ikhabe nommbila. Noma yimuphi balimi angakhula ezinhle ezinephunga elimnandi kalula imbali. Marigold akuyona fastidious ikakhulukazi. Kungcono ukukhetha ngokuba izwe lakini libe sesitshalo zokwelapha zalesi sihlahla. Izinhlobonhlobo kungenzeka kwendle ngaphezulu, enolaka futhi unzima.
Calendula isitshalo sasivumela emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni, indlela okuzivikela ngokumelene kungenzeka imiphumela kwemvelo. Temperature -5 ° C - esiphezulu ezingasetshenziswa amelane nalokhu imbali. Izipikili ngakho udinga ukutshala ekwindla. Uvele phezu ihlume inhlabathi ngokuvamile dilution ekuthuthukiseni kangcono. A isithiyo ekhethekile ukukhula efanele ungakha zonke izinhlobo ukhula ukuthi kudingeka asuswe njalo. Uma kwenzeka amanzi nesomiso kubo ngempela, kungenjalo isitshalo angase afe. Umanyolo kumele kusetshenziswe njengoba umquba noma ezinye compounds ewusizo. Ukuze calendula uyabukeka emehlweni ngangokunokwenzeka, kungcono ukuhlwanyela imbewu extra ekuqaleni kwehlobo kwentwasahlobo futhi. Ngu ekuvimbeleni imbewu indlela wokubopha abahluthula izimbali, kungaba nomthelela kwelulwa kwesikhathi izimbali.
Phakathi izimbali, udinga ukuqoqa futhi ome imbali. Marigold kuyoba usizo ikakhulukazi nokwelashwa izifo eziningi. It Kunconywa ukugcina kwabo ifomu eyomile ekamelweni umoya. Ekwindla ezidingekayo "ukuvumela" izitshalo ambalwa ekugcineni uvuthwe - imbewu izosetshenziselwa ukuhlwanyelwa esilandelayo. Ngo inqubo ukuzithiba Lokusakaza imbewu plant abahlakazekile umoya kuleli uhla ngokushesha zezimbali, okuyinto kungatholakala entwasahlobo ka amahlumela zokuqala.
izimbali Okumangalisayo of marigold (calendulakuva) banezimfanelo esiyingqayizivele. Nge izimbali omisiwe kungenziwa ikamelo disinfected. Uthuthuva azidle, efana itiye, ingavinjelwa isifo esithile esingathí sina futhi kwenzeka yonke indawo. izitshalo ezinjalo ezisetshenziswa ezimbonini eziningi: Cosmetology, nezesikhumba, ukupheka, amakha kanye imithi.
Okuyigugu zokuhlobisa, ukudla, okwelapha kanye ifolishi kwezitshalo amaranth: zokutshala nokunakekela
Arabis alpine: ezikhula imbewu. Incazelo, zinhlobo arabisa
Kanjani ukwakha isithombe lendwangu ngezandla zakho?
Beautiful umzimba eqolo: sizama ekufezeni enhle
Silicone Isikhunta ukami zabo